Trump hadduu xilka isku dhajiyo maxaa laga yeelayaa? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Trump hadduu xilka isku dhajiyo maxaa laga yeelayaa?
September 24, 2020 at 16:37 Trump hadduu xilka isku dhajiyo maxaa laga yeelayaa?2020-11-05T15:43:45+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
Waa la cusbooneysiiyay 28 Daqiiqadood ka hor
Waxaa wali socota tirinta codadka doorashada Mareykanka, iyadoo ay musharraxiinta aad ugu loollamayaan gobollo muhiim ah. Laakiin waxaa dhanka kale taagan xiisad ka dhalatay hadal uu madaxweyne Trump ku sheegay in doorashada la musuqmaasuqay.
Xilli ay wali harsanaayeen codad aad u badan ayuu Mr Trump sheegay inuu isagu ku guuleystay doorashada madaxweynaha.
Mas’uuliyiinta hoggaaminaya ololaha Trump ayaa durba gudbiyay dacwad la xiriirta hannaanka ay u socoto tirinta, iyagoo dalbanaya in gobollada qaar lagu celiyo tirintooda.
Joe Biden oo hadda ka horreeya Trump ayaa sheegay in uusan sheeganeynin guul balse uu aaminsan yahay inuu hayo waddada guusha, marka tirinta lasoo gabogabeeyana uu yahay qofka ay guusha raaceyso.
Xilka ma wareejin doonaa Trump?
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bishii September diiday inuu xaqiijiyo inuu si nabad uu xilka ku wareejin doono haddii looga guuleysto doorashada Mareykanka.
“Hagaag, waa in dhammaanteen aan ka dhuursugnaa waxa dhici doonaa” ayuu yiri madaxweyne Donald Trump oo shir jaraa’id ku qabtay Aqalka Cad.
Wuxuu hoosta ka xariiqay inuu rumeysan yahay in natiijada doorashada ay ku dambeyn doonto gacanta maxkamada ugu sarreysa dalkaas. Trump ayaa shaki badan ka muujinayay codeynta dhinaca boostada oo dad badan ay adeegsadeen sababo la xiriira cudurka safmarka ah ee corona.
Mar arrintaas wax laga weydiiyay wuxuu ku jawaabay: “Waxaan si weyn cabasho uga qabaa qaabka codeynta.”
“Meesha halaga saaro qaabkan codeynta ah, markaas waxay u dhaceysa si nabad ah, haddii kale ma jiri doonto xil wareejin, waxaa jiri doona is qabqabsi.”
Madaxweyne Trump ayaa ku dooday in codeynta qaabka boostada ay suurtagalin karto in wax la is daba mariyo.
Dhanka kale Joe Biden oo ah ninka la tartamaya Trump oo weriyeyaasha kula hadlayay magaalada Delaware wuxuu ku tilmaamay hadalka kasoo baxay Trump “Mid aan macquul aheyn”.
Koox ka tirsan Dimuqraadiga ayaa in Mareykanka ay ka jirto dowlad Aqalka Cad ka saari karto kuwo ku hamiya inay si sharci darro ku sii joogaan.
Haddaba haddii Trump uu diido in uu xilka wareejiyo maxaa dhici kara?
Barbara McQuade oo horay usoo noqotay xeer ilaaliyaha Michigan, haddana ah macallimad culuunta sharciga ka dhigta jaamacadda Michigan ayaa wargeyska The Atlantic ee kasoo baxa dalka Mareykanka u sheegtay in haddii madaxweyne Trump uu ku adkeysto in uu xafiiska sii joogo marka uu dhammaado muddo xileedkiisa, laamaha ammaanka ay ka shaqeyn doonaan sidii xafiiska looga saari lahaa.
“Madaxweyne Trump waxaa uu markiiba luminayaa awoodda uu siinayo dastuurka dalka Mareykanka, maadaam uu dhammaaday muddo xileedkiisa”, ayey tiri Barbara.
Qaar kamid ah warbaahinta maxalliga ee Mareykanka ayaa kusoo warramay in haddii madaxweynaha uu dhammeysto muddo xileedkiisa ama xilka laga qaado balse uu ku adkeysto in uu xafiiska sii joogo uu weynayo awoodda uu ku amro ilaalada madaxweynaha ama dhammaan ciidamada Mareykanka ee ka amar qaata.
Madaxweyne Trump oo markaas noqon doona muwaadin caadi ah ah ayaa waxaa meesha ka baxaya xasaanadii uu lahaa ee ahayd in aanan wax dacwad ah lagu soo oogi karin inta uu xilka hayo, waxaana dhici karta in la xiro, laguna soo oogo dacwad ah in uu si sharci darro ah ku joogay xafiiska.
Inkastoo madaxweyne walba oo Mareykan ah marka uu xilka ka dego uu xaq u leeyahay in la siiyo ilaalada madaxweynaha ee loo yaqaano Secret Service, haddana taas kama hor-istaageyso in xafiiska laga saaro.
Halkee loo laaban haddii natiijada doorashada lagu murmo?
Marka la eego sooyaalka taariikheed ee Mareykanka, natiijada doorashada madaxtinimada Mareykanka ma noqon karto mid dhibaato u horseedda Mareykanka, waana arrin naadir ah in lagu murmo.
Dastuurka Mareykanka waxa uu dhigayaa in marka hore madaxweyne xil haya uusan awood u lahayn in doorasho uu ku tilmaamo mid aan waxba ka jirin, sidoo kalena walaac walba oo laga muujiyo doorashada, maamullada gobollada Mareyanka ee maamula guddiga doorashada ay awood u leeyihiin inay baaritaan ku sameyaan haddiiba ay jirto eedeyn ah wax isdaba marin dhanka doorashada ah.
Waxaa adag ama naadir ah in marka baaritaan la sameeyo wax laga badelo natiijada doorashada, maadaama marka horeba ay adag tahay in la sameeyo wax isadab marin dhanka doorashada Mareykanka ah.
Tallaabada kale ee u bannaan musharixiinta doorashada haddii lagu murmo doorashada ayaa waxay tahay in dacwadooda ay u gudbiyaan maxkamadda ugu sareysa Mareykanka, maxkamadaas oo in ay waxba kama jiraan kasoo qaado doorashada u baahnaan doonta caddeymo adag.
Trump wali ma u furan tahay waddada guusha?
Joe Biden wuxuu hadda heystaa 243 cod oo ah kuwa loo yaqaanno ” Electoral College”, taasoo ka dhigan in uu tirada lagu guuleysanayo ee 270-ka ah uga dhow yahay Donald Trump oo wali heysta 214.
Doorashada Mareykanka waxaa codadka lagu qiimeeyaa heer gobol halkii qof iyo cod loo xisaabin lahaa.
Gobol kasta oo ka tirsan Mareykanka wuxuu leeyahay tiro codad ah oo loo qoondeeyay, taasoo ku xiran tirada shacabka ee ku nool gobolkaas.
Guud ahaan isku darka 538 cod ayaa laga heli karaa dhammaan gobollada.
Mr Trump wuxuu u baahan yahay inuu ku guuleysto gobolka Georgia (oo leh 16 cod), gobolka North Carolina (oo leh 15 cod), Pennsylvania ( oo leh 20 cod) iyo mid ka mid ah labada gobol ee kala ah Arizona (oo leh 11 cod) ama Nevada (oo leh 6 cod). Markaas waxaa u suuragaleysa inuu mar labaad noqdo madaxweynaha Mareykanka, afarta sano ee soo socota.
Saraakiisha doorashada ee ku sugan gobolka Georgia waxay sheegeen inay ilaa xalay oo dhan wadeen tirinta codadka, ayna sii ambaqaadi doonaan tan iyo inta ay kasoo afjarayaan.
Saqdii dhexe ee xalay – xilliga Mareykanka – waxay soo tabiyeen in ilaa markaas ay jireen codad gaaraya 90,000 oo aan wali la tirinin.
Waqtigaas madaxweyne Trump wuxuu ku horreeyay 31,000 oo cod, laakiin hoggaamintaas way soo yaraaneysay marba marka ka dambeysay.
Gobolka Arizona, Mr Biden ayaa ku hoggaaminayay qiyaastii 80,000 oo cod, iyadoo natiijooyin kale laga filayo maanta oo Khamiis ah.
Sidoo kale natiijada gobolka Nevada ayaa soo bixi doonta ilaa galinka dambe ee Khamiista ama galinka hore ee Jimacada.
Gobolka Pennsylvania Trump ayaa ku horreeya, hase yeeshee waxaa sii kordhaya codadka uu helayo Biden.
Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in codadka ay hadda tirintooda dhiman tahay ay yihiin kwii lagu soo diray boostada, waxaana ilaa hadda la ogyahay in codadkaas ay u badan yihiin kuwa taageerayaasha xisbiga Dimuqraaddiga ee uu ka socdo Joe Biden.
« Xiddigaha Salah, Man & Firmino Oo Looga Digay Saxiixa Cusub Ee Diogo Jota.
Kadib Willian, Mikel Arteta Oo Xiddig Kale Ka Doonaya Chelsea »